Wafdigii Madaxweynaha oo marke dib uga dhoofey Muqdisho ka dib markii cilad ay ku timid diyaaradii hore ee u qaadey Koonfurta Suudaan – idalenews.com
Wafdigii Madaxweynaha oo marke dib uga dhoofey Muqdisho ka dib markii cilad ay ku timid diyaaradii hore ee u qaadey Koonfurta Suudaan
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow raacay diyaarad gaar ah oo loo dalbay, kadib markii ay cilad soo wajahday diyaaradii uu saakay raacay, si deg deg ahna dib Muqdisho ugu soo laabatay, markii mid ka mid matooradii diyaarada uu istaagay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo muddo saacad ku dhow ku sugnaa qeybta VIB-da Garoonka ayaa diyaarad kale ay qaaday, isagoo ku sii jeeday magaalada Juba ee dalka Koofurta Sudan.
Mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku sii sagootiyay Madaxweynaha garoonka diyaaradaha, iyagoo Alle uga baryay in si nabad ah ku geeyo dalka Sudan.
Wararka ayaa sheegaya in diyaaradii saakay ka qaaday garoonka oo cilad soo wajahday darteed dib ugu soo laabatay muddo 25-daqiiqo oo hawada ku jirtay ay wali ku sugan tahay garoonka diyaaradaha, iyadoo koox farsamaqaano ku mashquulsan yihiin dayactirka diyaarada.
Diyaarada ayaa qeybta dambe ee lugaha ka bur buray, markii uu ku baahay qiica ka baxay dhinac ka mid ah diyaarada, gaar ahaan qeybtii matoorka.
Afhayeenka Madaxtooyada Eng. Yariisow ayaa sheegay in safarka Madaxweynaha uu sii wadanayo, isla markaana diyaarad kale raacayo.
Wariyeyaal ku sugnaa garoonka ayaa loo diiday inay duubtaan diyaarada cilada soo wajahday, iyadoo qaarkood oo Video ka duubtay ay ku wargeliyeen Mas’uuliyiinta garoonka in ay tir tiraan.
Hadal heynta ugu badan ee magaalada ayaa ah cilada soo wajahday diyaaradii uu raacay Madaxweynaha iyo inuu ka bad baaday shil diyaaradeed.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Diyaarad ciladooday ee uu ku sigatay inay shil gasho laga soo kireeyay dalka Kenya, iyadoo Afhayeenka Madaxtooyada uu beeniyay shakiga arrintaas ku saabsan, maadaama dowladda Soomaaliya iyo Kenya uu xiriirkooda diblomaasiyadeed uu sii xumaaday.
Diyaaradaha ay isticmaalaan madaxda dowladda ayaa ah kuwo la soo kireeyo, mana jirto diyaarad si milkiyad u leedahay dowladda Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay bur burkii dowladdii hore, xilligaas oo diyaarada Somali Airlines ay raaci jireen Mas’uuliyiinta dowladda iyo dadka Soomaaliyed.
Gabar uu dhalay S/Guuto Maxamed Cali Samatar oo la filaayo in loo magacaabo Safiirka Somalia ee Mareykanka